Saciid Deni oo isaga baxay kalfadhigga 45aad ee Baarlamaanka Puntland oo su'aalo adag lagu weydiiyay aawgeed - Awdinle Online
Saciid Deni oo isaga baxay kalfadhigga 45aad ee Baarlamaanka Puntland oo su’aalo adag lagu weydiiyay aawgeed
October, 26, 2019 (AO) – Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland ayaa isaga baxay Kalfdhiggii 45aad ee Baarlamaanka Puntland oo maanta furmay kaddib markii su’aalo adag lagu weydiiyay.
Xildhibaan Cawil Daad oo ka tirsan mudanayaasha Baarlamaanka Puntland ayaa weydiiyay madaxweyne Deni su’aal u dhaceysay in madaxweynuhu ku fashilmay hoggaaminta Puntland, sidaa daraadeed looga baahan yahay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba in ay banneeyaan xafiiska.
”Waxaad xilka haysay sagaal bilood, wejiga dhabta ah ee xukuumadda aad hoggaamisana waxaa la moodaa in uu ku jiro maalmihii ugu dambeeyay ee muddo xileedkaaga, sidoo kale waxaa batay is qabqabsiga adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga, xaalada meel khatar ah ayeey mareysaa Puntland ilaa heer la gaaro in Masaajida laga Alla Baryo, sidaa daraadeed miyeeysan kula aheyn in aad xafiiska banneeysaan madaama aad ku fashilanteed hoggaankii la idiin dhiibay” ayuu su’aashiisa ku billaabay Xildhibaan Cawil.
Ka hor inta uusan ka jawaabin madaxweynaha su’aasha uu weydiiyay xildhibaan Cawil waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo yiri” Idinkoo sharfan, madaxweynuhu waa madaxweynihiinii, su’aalahana ha ahaadeen su’aalo hufan oo sharfan oo aan weerar ku ahayn shaqsi, dalka iyo dadkana maslaxaddiisa ah. Sidaas ayaan codsanayaa”.
Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo su’aasha ka jawaabayay ayaa yiri: “Xaqiiqda marka loo hadlo, dadka dalka xogtiisa haya ma’ahan Baarlamaanka oo keli ah. Dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer Puntland oo dhan”.
Markii uu halkaa hadalka marinayo madaxweyne Deni waxaa ka soo dhaxgalay xildhibaan Cawil oo guddoonka Baarlamaanka weydiisata yin madaxweynuhu uusan wali ka jawaabin su’aashiisii islamarkaana uu meel kale ku warwareegayo, hasse ahaatee madaxweyne Deni oo aad u careysay ayaa ku jawaabay” Waad aamuseysaa nidaamka dowladnimda haddadan raacinna, adiga ayaa mas’uuliyaddeeda qaadaya”.
intaa kaddibna madaxweynaha ayaa isaga baxay hoolka shirka Baarlamaanka, isaga oo u muuqday in uu siweyn uga carooday su’aalaha la weydiiyay, maalmihii ugu danbeeyayba waxaa jiray hadal heyn ku saabsaneyd in uu soconayo mooshin ka dhan ah madaxweynaha oo la horgeynayo Baarlamaanka Puntland.
Dhanka kale waxaad ayaamahan dambe si xoog ah loo hadal hayey in Maamulka Puntland dhibaatooyin xoogleh uga imaanayaa dhanka Dowladda Dhaxe, iyadoo loo adeegsanaayo dad ka tirsan maamulka iyo dad gaalangal weyn ku leh puntland.
Previous articleDhageyso :-Musharax Odawaa Oo Baaq U Diray Dowlada Dhexe Iyo Ahlusuna
Next articleWasiir Arrimaha Dibadda oo kulan la qaatay Safiirka Sacuudiga ee Soomaaliya